အများဆုံးအမြတ်အတွက်အော်တိုအရောင်းအဝယ်ဖြစ်! - ကုန်သွယ်ရေးမေလ ၂ ရက်၊
အော်တိုကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ2ကုန်သွယ်မှု 2022 လမ်းညွှန်ကိုလေ့လာပါ။
အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်စဉ်သည်သင်အား algorithm ၏အကူအညီဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ အချို့ဖြစ်ရပ်များတွင်အော်တိုကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်သည်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများရှာဖွေနေသည့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များကိုစစ်ဆေးပြီးနောက်မည်သည့်နေရာတွင်ထားရမည်ကိုသတင်းအချက်အလက်ဖြင့်အချက်ပြပါလိမ့်မည်။
အခြားကိစ္စများတွင်ကားအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းသည် ၃၆၀ ဒီဂရီကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရသည့် ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးနိုင်လိမ့်မည်။ မည်သည့်ရွေးချယ်မှုကိုမဆိုသင်ပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိပါစေ၊ သင်၏ငွေနှင့်မခွဲခွာမီကားအရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ငန်းကိုသုတေသနပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
နောက်ဆုံးတွင်စက်မှုလုပ်ငန်းအများစုသည်သင်ရရှိနိုင်သောအမြတ်အစွန်းပမာဏနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ရဲရင့်စွာပြောဆိုသောလိမ်လည်သူအနုပညာရှင်များလွှမ်းမိုးထားသည်။ ဤလမ်းညွှန်တွင်အော်တိုကုန်သွယ်မှုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်၊ ၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးပံ့ပိုးပေးသူများကိုရှာဖွေရန်သင်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အချက်များနှင့်အပြင်ကိုလေ့လာသည်။
မှတ်စု: အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာ သင်ရွေးချယ်ထားသော အော်တိုအရောင်းအ၀ယ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ အနိုင်ရနှုန်းတောင်းဆိုချက်များကို မှန်ကန်ကြောင်း အတည်ပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သရုပ်ပြအကောင့်၊ အခမဲ့ အစမ်းသုံးခြင်း သို့မဟုတ် ငွေပြန်အမ်းပေးသည့် အာမခံပုံစံဖြင့် လာနိုင်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင်ကားအရောင်းအဝယ်ဆိုတာဘဏ္financialာရေးတူရိယာတွေကိုအလိုအလျောက်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ရောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တယ်။ များသောအားဖြင့်သင်သည် AI (သို့) စက်သင်ခြင်းဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောကြိုတင်စီစဉ်ထားသည့် algorithm ကိုအားကိုးလိမ့်မည်။ ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းများကိုရှာဖွေနေသည့် Forex၊ စတော့ရှယ်ယာများ၊ ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သို့မဟုတ် cryptocurrencies စသည်တို့ဖြစ်သည့်ငွေကြေးစျေးကွက်များကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်ထို algorithm ကိုတာဝန်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေးဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ထိုအတိုင်းပြုလုပ်ပါကစွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားနိုင်သောကုန်သွယ်မှုကိုဖန်တီးခြင်းဖြင့်အမြတ်ထုတ်ရန်ရှာဖွေလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ auto trading bot သည် အဓိက forex pairs များကို သုတေသနလုပ်ရန် တာဝန်ပေးသည်ဟု ဆိုကြပါစို့ EUR / အမေရိကန်ဒေါ်လာ. Bollinger Bands နှင့် RSI ကဲ့သို့သော အဓိကနည်းပညာဆိုင်ရာ အညွှန်းကိန်းများ၏အကူအညီဖြင့်၊ အတွဲကို ရောင်းပြီးသောအခါတွင် အော်တိုဘော့တ်ကို ၀ယ်ယူရန် အစီအစဉ်ဆွဲထားနိုင်သည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေ၏လက်ကျန်ချိန်ခွင်လျှာတွင်၊ စျေးကွက်ပြင်ဆင်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတော့မည့်အချိန်တွင် ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဝယ်ယူခြင်း၏အမြင်ဖြင့် ဤသည်မှာ။ အယ်လဂိုရီသမ်ကို အစပျိုးလိုက်သောအခါတွင်၊ EUR/USD သည် ဝင်ပေါက်ပေါက်စျေး 1.105 ဖြင့် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်သင့်သည်ဟု အာမခံသည်။
သင် sign up လုပ်သည့် auto trading provider အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ bot သည်သင့်အား၎င်း၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုအသေးစိတ်အချက်အလက်များပါ ၀ င်သော real-time signal ကိုပေးပို့နိူင်သည်။ ထို့အပြင် entry နှင့်ထွက်ရန်အမှာစာစျေးနှုန်းများကိုတင်သင့်သည်။ သင့်အနေဖြင့်အချက်ပြကိုသင်ကိုယ်တိုင်သုတေသနလုပ်ရန်စွမ်းရည်ရှိသည်၊ တနည်းအားဖြင့်အော်တိုကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူသည် All-In ၀ န်ဆောင်မှုပေးနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသက်ဆိုင်ရာ ၀ င်ခွင့်နှင့်ထွက်ပေါက်အမိန့်များကိုသင့်ကိုယ်စားတင်ပေးလိမ့်မည်။
အကယ်၍ ဤကိစ္စဖြစ်ပါကဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်တွင်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိရန်မလိုပါ။ အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်ခြင်းသည်သင်၏ရေရှည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရည်မှန်းချက်များအတွက်ဖြစ်သကဲ့သို့နေရာများစွာတွင်လိမ်လည်သူများကိုလွှမ်းမိုးထားကြောင်းသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာပံ့ပိုးသူသည် 'အာမခံထားသော' အမြတ်ငွေ ၉၀% နှင့်အထက်ကတိပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း၎င်းသည်အများအားဖြင့်သာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကားအရောင်းစက်ရုပ်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မဝယ်ယူမီသင်၏အိမ်စာကိုလုပ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ပံ့ပိုးပေးသူများကဖွင့် hyperbole တောင်းဆိုမှုများအများကြီး
Signal များမှတဆင့် Semi-Auto Trading
ကျွန်ုပ်တို့သည် semi-auto trading provider များကိုရည်ညွှန်းသောအခါ၎င်းသည်အဆုံးမှအဆုံးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အားလုံးမဟုတ်ပါ။ ဖြစ်ရပ်များ၏အများစုမှာ Semi- အော်တို အွန်လိုင်းကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်းအချက်အလက်များမှတဆင့်ကုန်သွယ်အကြံပြုချက်များကိုဆက်ကပ်။ Learn2Trade algorithm ကိုအဓိကဥပမာတစ်ခုအဖြစ်ယူကြပါစို့။ မြင့်မားသောအဆင့်မြင့်သော algorithm မှထောက်ပံ့သောအခြေခံနည်းပညာသည်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည် Forex ကုန်သွယ် နှင့် cryptocurrency စျေးကွက်တစ်ခု 24/7 အခြေခံပေါ်မှာ။ algorithm သည်ပိုက်ဆံရှာဖွေနိုင်သည့်အခွင့်အလမ်းကိုတွေ့ရှိသည်နှင့် ၀ န်ဆောင်မှုအဖွဲ့ဝင်များသို့အချက်ပြပါလိမ့်မည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ signal တွင်အောက်ပါအချက်အလက်များပါ ၀ င်နိုင်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှု: BTC / အမေရိကန်ဒေါ်လာ
အချက်ပြ အလွန်အကျွံဝယ်ယူပိုင်နက်အကြံပြုခြင်း RSI
အမြတ်အစွန်း - $9,410
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအဆုံးမှအဆုံးသို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်း၏ ၉၀% ကိုအလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာကုန်သည်သည်ငွေကြေးစျေးကွက်ရှာဖွေရန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရမလိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဲဒီအစား, ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ဤအပိုင်းကို Pre- ပရိုဂရမ် algorithm ကိုမှတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ကုန်သည်မှအချက်ပြမှုကိုလက်ခံပြီးသည်နှင့်၎င်းတို့တွင်ရွေးချယ်စရာသုံးခုရှိသည်။ ကုန်သည်သည်ကုန်သွယ်မှုမပြုလုပ်မီတွေ့ရှိချက်များကိုကိုယ်တိုင်လေ့လာရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ကုန်သွယ်မှုကိုချက်ချင်းထားပါ၊ သို့မဟုတ်ရိုးရှင်းစွာမှာအားလုံးအဘယ်သူမျှမကုန်သွယ်နေရာ။ အရေးကြီးသည်မှာဤအရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုအမျိုးအစားသည် AI နှင့်စက်သင်ကြားခြင်း၏အဆင့်မြင့်သောစွမ်းရည်များမှအကျိုးရယူလိုသူများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သင်၏ကုန်သွယ်မှုကိုထိန်းချုပ်ထားသည်။
အပြည့်အဝ - အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေး
အခြေခံသဘောတရားအရသုတေသနလုပ်ငန်းစဉ်သည်အထက်ဖော်ပြပါအပိုင်း၌ဆွေးနွေးခဲ့သည့်အတိုင်းကဲ့သို့ပင်နည်းပညာသည်ရှာဖွေရန်မျှော်လင့်နိုင်သလောက်အတူတူပင်အလုပ်လုပ်သည် တစ်ရက်ကုန်သွယ် နာရီပတ်ပတ်လည်အခွင့်အလမ်းများ။ သို့သော်သော့ချက်ခြားနားချက်မှာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို algorithm မှတွေ့ရှိပြီးနောက်သင်၏ကိုယ်စားကုန်သွယ်မှုကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်ဖြစ်သည်။
သင့်အနေဖြင့်ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟုသုတသို့မဟုတ်အတွေ့အကြုံမရှိပါကတစ်စုံတစ်ရာတွင်ဤအထူးရွေးချယ်မှုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သင် algorithm ကိုတွေ့သောကုန်သွယ်ရေးအချက်ပြမှုများကိုသုတေသနပြုရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီအစား, သင်အဘို့အမိန့်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချရန် bot ကိုအပ်နှင်းနေကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်အမှန်တကယ်အပြည့်အဝ - အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုတရားဝင်ကြောင်းယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့သင်ဟာ bot ကုန်သွယ်မှုကိုဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်ကုန်သွယ်မှုဆုံးရှုံးမှုကိုနေရာချနေတဲ့နေရာမှာမနေချင်ပါဘူး။
သင်ရရှိနိုင်သောတတိယရွေးချယ်မှုမှာမှန်အရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်တွင်မှန်ကန်သောမှတ်တမ်းများရှိသည့်အတွေ့အကြုံရှိရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတစ် ဦး ကိုရွေးချယ်ပြီးသူတို့၏အစုစုကိုတူတူကူးရန်ဖြစ်သည်။
တစ် ဦး ချင်းပြုလုပ်သောမည်သည့်အနာဂတ်ကုန်သွယ်မှုကိုမဆိုသင်ထင်ဟပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကသင့်အားအတွေ့အကြုံများစွာရှိသောကုန်သည်တစ် ဦး ၏ကျွမ်းကျင်မှုများမှအကျိုးကျေးဇူးရရှိစေပြီး၊ တစ်ချိန်တည်းတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ရန်မလိုအပ်ပါ။
ဤသဘောမျိုးဖြင့်မှန်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံး passive ဖြစ်သကဲ့သို့ AI-based auto trading ကဲ့သို့တူညီသောအခြေခံမူများကိုဆက်လက်ကျင့်သုံးနေဆဲဖြစ်သည်။ ပံ့ပိုးပေးသူများအနေဖြင့် eToro ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်သင့်အားအနည်းဆုံးဒေါ်လာ ၂၀၀ ဖြင့်ကုန်သွယ်မှုကိုကူးယူရန်ခွင့်ပြုသည်။ သင်သည်ထို site ရှိကုန်သည်၏သမိုင်းကြောင်းအရအပြည့်အဝချိုးဖောက်ခံရသည်။
တနည်းအားဖြင့်သင် PAMM အကောင့်ပေးသူကိုစဉ်းစားရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်။ သင်၏ငွေကိုကျွမ်းကျင်သောကုန်သည်တစ် ဦး နှင့်အတူတကွစုစည်းထားသည့်နေရာဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ကုန်သည်သည်သင်၏ကိုယ်စားပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ယူရောင်းချလိမ့်မည်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့်သူတို့သည်သင့်အတွက်လုပ်ပေးသောမည်သည့်အမြတ်အစွန်းကိုမဆိုကော်မရှင်ရရှိလိမ့်မည်။
အော်တိုကုန်သွယ်မှုနေရာ၏ ကြီးမားသောအမြောက်အမြားကို Forex နှင့် cryptocurrencies တို့က လွှမ်းမိုးထားသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားနှစ်ခုစလုံးသည် 24/7 အခြေခံဖြင့် ကုန်သွယ်မှုဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ငွေဖြစ်လွယ်မှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုပမာဏ၏ အစုအပုံများမှ အကျိုးများသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားအများစုကို အကျုံးဝင်သော အော်တိုကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းများရှိသည်။ ဒီအထဲမှာတေကြ စတော့ရှယ်ယာ, ညွှန်းကိန်းစွမ်းအင်များ၊ မာကျောသောသတ္တုများ၊ အတိုးနှုန်းများနှင့် ငွေချေးစာချုပ်များ။
အရေးကြီးသည်မှာသင်အဆင်ပြေသောကုန်သွယ်မှုခံစားရသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းထဲတွင်ပါ ၀ င်သည့်အော်တိုအရောင်းအဝယ် bot ကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာပေါင်းထရီလီယံပေါင်းများစွာသော forex space နှင့်ထိတွေ့ရန်ရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကအဓိကနှင့်အသေးစားငွေကြေးများကိုပစ်မှတ်ထားသောပံ့ပိုးသူနှင့်ကပ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်လျှင်၎င်းသည်သင်အသုံးပြုလိုသည့်အော်တိုကုန်သွယ်မှုစနစ်ပေါ်မူတည်သည်။ ထိုသို့ပြောဆိုခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူအများစုသည်အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုလိုကြသည်။
ထို့ကြောင့် All-in ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်အော်တိုကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူကိုအသုံးပြုသောအခါမည်သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမည်သို့လုပ်ဆောင်မည်ကိုအောက်ပါအဆင့်များကဖော်ပြသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနှင့်ကားအရောင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစတင်ရန်အနည်းဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်ရွေးချယ်သည့်ပေးသူနှင့်အကောင့်အမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ အတော်လေးကွဲပြားနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့်အနည်းဆုံးအပ်ငွေများသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ခန့်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အော်တိုကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူသည်သင့်ထံမှခွင့်ပြုချက်ရယူရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်ကသင်၏ကိုယ်စား ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူသည်သင်ကိုယ်စားပိုင်ဆိုင်မှုများကို ၀ ယ်ရန်နှင့်ရောင်းရန်အတွက် ၀ မ်းသာကြောင်းအတည်ပြုသည်။ အကယ်၍ သင်သည်အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်သောလုပ်ဆောင်မှုကိုမဖွင့်လျှင်၊ သင်ရရှိမည်ဖြစ်သည် Forex အချက်ပြမှုများ။ ထို့နောက်သင်အချက်ပြမှုများကိုသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်အချို့သောကုန်သွယ် parameters များကိုသတ်မှတ်ရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ bot ဟာမင်းရဲ့လက်ကျန်တစ်ခုလုံးကိုအမှာစာတစ်ခုတည်းနဲ့ကုန်သွယ်ချင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ထို့ကြောင့်အချက်ပြမှုတစ်ခုစီပေါ်တွင်သင်ထားလိုသည့်အများဆုံးပမာဏကိုထည့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်မင်းကဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ကိုစင်မြင့်ပေါ်မှာအပ်လိုက်ပြီဆိုပါစို့။ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်သင်၏လက်ကျန်ငွေ၏ ၅% ထက် ပို၍ မစွန့်စားလိုပါကဤအရာကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။
သင့်အနေဖြင့် stop-loss နှင့် take-profit target အချို့ကိုလွတ်လပ်စွာ ၀ င်ရောက်နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီတွင် ၃% ထက် ပို၍ မဆုံးရှုံးချင်ပါ။ အလားတူစွာသင်သည်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခုလျှင် ၅% အမြတ်အစွန်းကိုပစ်မှတ်ထားလို။ ၎င်းကိုအစပျိုးသောအခါပိတ်ထားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်အကြံပြုထားသည့် ၀ င်ပေါက်နှင့်ထွက်ပေါက်ဈေးကို algorithm သို့ထားခဲ့ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
✔️ Birds- မျက်လုံးကြည့်ရန်
သင်၏ကိုယ်စားအလိုအလျောက်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်း bot သည်သင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတိုင်းသည်သင်၏အကောင့်ပေါ်တယ်မှအပြည့်အဝပွင့်လင်းမြင်သာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်သင်မည်မျှငွေရှာသည်၊ အရှုံးပေါ်သည်ကိုတိုင်းတာရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကဘဲ၊ သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလိုအပ်ချက်များအတွက် bot သည်မှန်ကန်သည်ဖြစ်စေအရေးကြီးသည်။ bot တောင်မှတောင်မှ is မင်းကိုပိုက်ဆံကောင်းကောင်းရှာလိုက်ရင်သူ့ရဲ့နည်းဗျူဟာတွေဟာသင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအတွက်အန္တရာယ်များလွန်းတယ်ဆိုတာကိုသင်တွေ့လိမ့်မယ်။
Auto Trading Platform တွင်ငွေရှာခြင်း
သင်ရွေးချယ်ထားသောအော်တိုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းတွင်ငွေရှာသောအခါ၎င်းသည် ROI (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လာ) အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သင်၏စုစုပေါင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအနိမ့်ဆုံးနှုန်းဖြင့်မြှောက်ရန်မလွယ်ကူပါ၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုန်သွယ်မှုတစ်ခု၌မည်မျှလောင်းကြေးရှိနေသည်အပေါ်မူတည်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်သင်ပလက်ဖောင်းထဲကိုဒေါ်လာ ၂၅၀ သွင်းမယ်ဆိုရင် bot ကသူလုပ်သမျှကုန်သွယ်မှုတိုင်းမှာဒေါ်လာ ၂၅၀ ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး။ ၎င်းအစား၎င်းသည်အလယ်အလတ်နှင့်မြင့်မားသောစွန့်စားမှုကုန်သွယ်မှုတွင် ၁-၂% နှင့် ၃% သည်အနိမ့်မှအလယ်အလတ်ရှိသောကုန်သွယ်မှုတွင်ခွဲဝေချထားနိုင်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ဒေါ်လာ ၅၀၀၀ ကိုအလိုအလျှောက်ကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသို့အပ်နှံသည်ဟုဆိုပါစို့။
ကုန်သွယ်မှု ၁ တွင် ၅ ရာခိုင်နှုန်းသည်ဒေါ်လာ ၂၅၀ ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှုသည်အမြတ် ၄% (ဒေါ်လာ ၁၀) ရရှိသည်။
ကုန်သွယ်မှု ၃ တွင် ၁% သည်ဒေါ်လာ ၅၀ ဖြစ်သည်။ ကုန်သွယ်မှု 1% ($ 3) ရှုံးသည်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်း bot သည်အရောင်းအ ၀ ယ် ၁ နှင့် ၂ မှဒေါ်လာ ၁၀ နှင့် ၃၃ ကိုရရှိပြီးကုန်သွယ်မှုတွင်ဒေါ်လာ ၀.၇၅ ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ၎င်းသည်ဒေါ်လာနှင့်ဆင့်မှအမြတ်ငွေစုစုပေါင်းကို ၄၂.၂၅ အထိရရှိသည်။ သင်၏ ROI အရ ၀.၈၄၅% ရှိသည်။ ဒီနံပါတ်ကနည်းနည်းလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီအချက်ကကုန်သွယ်မှုသုံးခုနဲ့သာသက်ဆိုင်တယ်ဆိုတာသတိရဖို့အရေးကြီးတယ်။
အော်တိုကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်များသည်တစ်နေ့လျှင်များစွာသောအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုပြုလုပ်လေ့ရှိရာသင်၏အမြတ်အစွန်းများသည်စတင်တိုးပွားလာနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာအထက်ပါဥပမာများသည်အစုရှယ်ယာ ၅% ထက်မပိုသောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုတည်းတွင်သာလွှမ်းမိုးထားသည့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစွန့်စားမှုမှရှောင်ရှားသည့်နည်းဗျူဟာကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ ဤအရာကို ပို၍ ပင်ရှေးရိုးဆန်စွာကျင့်လိုပါကအများဆုံးခွဲဝေမှုရာခိုင်နှုန်းကိုထပ်မံလျှော့ချနိုင်သည်။
Auto Trading စက်ရုပ်သည်မည်မျှကုန်ကျမည်နည်း။
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ ကားအရောင်းအဝယ်စနစ်သည်သင့်အတွက်မည်မျှကုန်ကျမည်ကိုအလွန်ခက်ခဲပြီးမြန်ဆန်သောစည်းမျဉ်းမရှိပါ။ ၎င်းသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာကွဲပြားနိုင်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသောပံ့ပိုးပေးသူအများစုသည်ကော်မရှင်အခြေပြုပုံစံဖြင့်လုပ်ကိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာပလက်ဖောင်းသည်သင်၏ကိုယ်စားသင်ပြုလုပ်သောအနိုင်ရကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီ၏ရာခိုင်နှုန်းကိုရရှိလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်၏ရွေးချယ်သူသည် ၁၀% ကော်မရှင်နှုန်းရှိသည်ဟုဆိုပါစို့။
အော်တိုကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းထဲကိုခင်ဗျားဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံတယ်
ပလက်ဖောင်းတစ်လတစ်လျှောက်လုံးကုန်သွယ်မှု 100 လုပ်ပါ
ROI သည် ၁၅% ဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ ၃၀၀ နှင့်ညီသည်
ပလက်ဖောင်းသည် ၁၀% ကော်မရှင်ယူရလိမ့်မည်၊ ၎င်းမှာဒေါ်လာ ၃၀ ဖြစ်သည်
ဒါကမင်းကိုဒေါ်လာ ၂၇၀ နဲ့အမြတ်အစွန်းရစေတယ်
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းပုံသည်သင့်အတွက်ရရှိနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့အငြင်းပွားလိမ့်မည်။ အဓိကအကြောင်းပြချက်မှာ platform သည်အမြတ်အစွန်းရသောအခါ၌သာငွေရှာသည်။ ထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့, ပံ့ပိုးပေးသင့် ROI တိုးမြှင့်၏အမြင်နှင့်အတူ, သင့်ကိုယ်စားအန္တရာယ် - ဆန္ဒရှိကုန်သွယ်မှုလုပ်ရန်ငွေရေးကြေးရေးလှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အရေးကြီးသည်ကား၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းသည်သင့်အတွက်ပိုမိုများပြားလေ၊
အော်တိုအရောင်းအ ၀ ယ်ဆိုက်တစ်ခုကိုမည်သို့ရွေးချယ်ရမည်နည်း
သံသယအရိပ်မရှိပါကအော်တိုကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်၏အခက်ခဲဆုံးအပိုင်းမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောပံ့ပိုးသူကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လမ်းညွှန်တစ်လျှောက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအာကာသမှပံ့ပိုးပေးသူအများစုသည်ဂဏန်းနှစ်လုံးပါ ၀ င်သည့်အာမခံချက်ရရှိရန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်။ ဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များတွင်အမြတ်အစွန်းအာမခံချက်ကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ၊ ကမ္ဘာပေါ်တွင်အအောင်မြင်ဆုံးအရောင်းအ ၀ ယ်အိမ်များပင်ရံဖန်ရံခါအရှုံးပေါ်ရသောလဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒီဂိမ်းရဲ့သဘောသဘာဝပဲ။
ထို့ကြောင့်ကားအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ရာတွင်သင်သတိပြုရမည့်အချက်များများစွာရှိသည်။
သင်ရှာဖွေရန်လိုအပ်သည့်အရေးကြီးဆုံးမက်ထရစ်မှာသင်ပံ့ပိုးသူမှကြေငြာသော win win အချိုးအစားကိုအတည်ပြုရန်စွမ်းရည်ရှိ / မရှိဆိုတာဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်အားလစဉ် ၄၀% အာမခံထားသည့် ROI ကိုလုပ်ပေးနိုင်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါကကျွန်ုပ်တို့သည်အမှန်တရားကိုပြောပြပါကသင်ဘယ်လိုသိနိုင်မည်နည်း။ များသောအားဖြင့်တော့သင်ဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမလုပ်မချင်းအလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်ကိုသင်ဝင်ရောက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူး။
တစ်ချက်တွင်၊ ပံ့ပိုးပေးသူများသည်သူတို့၏သမိုင်းဝင်ကုန်သွယ်မှုရလဒ်များကိုအများဆိုင်ဒိုမိန်းတွင်အဘယ်ကြောင့်မထုတ်ပြန်ရကြောင်းကျွန်ုပ်တို့နားလည်ကြသည်။ အခြေခံ algorithm ကိုပြီးမြောက်ရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ပလက်ဖောင်းသည်ဤသတင်းအချက်အလက်များကိုလွတ်လပ်စွာဖြန့်ဝေခြင်းကိုမလိုလားခြင်းသည်တရားမျှတသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ပံ့ပိုးသူသည်ငွေအမြောက်အမြားမပေးမီ ၀ န်ဆောင်မှု၏ထိရောက်မှုကိုစစ်ဆေးရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည့်အကာအကွယ်များစွာကိုထည့်သွင်းသင့်သည်။
ဥပမာ - အကယ်၍ ပလက်ဖောင်းတွင်သရုပ်ပြအကောင့်တစ်ခုကမ်းလှမ်းပါကသင်၏ရန်ပုံငွေကိုမစွန့်လွှတ်မီအချက်ပြမှုတစ်ခုစီကိုစစ်ဆေးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ပံ့ပိုးသူသည်အခမဲ့စမ်းသပ်ခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပြန်အမ်းခြင်းအာမခံကိုကမ်းလှမ်းပါက၎င်းသည်သင်မကျေနပ်ပါကသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်ခွင့်ပြုပေးသောကြောင့်လည်းထင်ရှားသည်။
အော်တိုအရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်၏ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်မှုကိုအကဲဖြတ်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာသင့်အိမ်စာကိုလုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ အင်တာနက်သည်ယိုယွင်းနေပြီးအော်တိုကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၏သုံးသပ်ချက်များနှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များဖြင့်ပြည့်နှက်နေသဖြင့်သင်သည်လက်ရှိနှင့်အတိတ်အသုံးပြုသူများ၏အတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာနိုင်သည်။ အထွေထွေသဘောတူညီမှုသည်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာစက်ရုပ်သည်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်နေသည်ဆိုပါက၎င်းသည်အစကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်ပံ့ပိုးသူကိုယ်တိုင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုလည်းသင်အကဲဖြတ်သင့်သည်။ ဥပမာ၊ ကားအရောင်းအ ၀ ယ်စက်ရုပ်၏နောက်ကွယ်တွင်မည်သူရှိသနည်း။ ပလက်ဖောင်းသည်မည်မျှကြာအောင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ရှိခဲ့သနည်း။ ပံ့ပိုးသူနှင့်တယ်လီဖုန်းဖြင့်စကားပြောရန်နည်းလမ်းရှိပါသလားသို့မဟုတ်အီးမေးလ်များမှတစ်ဆင့်အရာရာတိုင်းလိုအပ်ပါသလား။
အာကာသအတွင်းရှိအော်တိုကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူအများစုသည်ပွင့်လင်းမြင်သာသော ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဤအရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင့်ကိုယ်စား platform ပေါ်တွင်ပြုလုပ်သောကုန်သွယ်မှုတစ်ခုစီကိုသင်ကြည့်ရှုရန်ဆိုလိုသည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းသည်သင် bot မှယူနေသောစွန့်စားမှုနှင့်နည်းဗျူဟာအမျိုးအစားများကိုမျက်လုံးအပြည့်ကြည့်ရှုပေးသည်။ ထိုအရာများကြောင့်အချို့သောပံ့ပိုးပေးသူများသည်သင်၏အမြတ်နှင့်အရှုံးပမာဏကိုသာဖော်ပြပြီးသင်၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသောရန်ပုံငွေများသည်မည်သည့်နေရာတွင်အမှန်တကယ်ရောက်ရှိနေကြောင်းသင်မသိဘဲ ဤကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများကိုရှောင်ကြဉ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။
အော်တိုကုန်သွယ်ရေး ၀ န်ဆောင်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းသင်အကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုစျေးနှုန်းပေါ်တွင်သာအခြေခံမထားသင့်သောကြောင့်ဤကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်း။ နောက်ပြန်လှည့်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်ကားအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းနှစ်ခုကိုယူကြပါစို့။ ၎င်းတို့မှာ ၃၀% ကော်မရှင်နှင့် ၅% ကောက်ခံမည့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
သင်၏ပထမဆုံးစဉ်းစားရမည့်အချက်မှာကြီးမားသောတန်ဖိုးကိုပေးသည်ဟုသင်ထင်မြင်ယူဆသောကြောင့်ပြိုင်ဘက်ကင်းသော ၅% သောကော်မရှင်ပေးသည့်ပလက်ဖောင်းကိုရွေးချယ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်ဤသေချာပေါက်အမှုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ပိုမိုစျေးကြီးသောပံ့ပိုးပေးသူသည်တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှအမြတ် ၂၀% ရရှိပြီး၊ ပို၍ ထိရောက်မှုရှိသည့်ပလက်ဖောင်းတွင်ပျမ်းမျှ ၃% ဖြစ်လာလျှင်ကော။
ကောင်းပြီ၊ ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်အခြေခံပြီးနံပါတ်များကိုမြန်မြန်လေ့လာကြည့်ကြစို့
Provider 1 က ၃% ပြန်ပေးတယ်။ ဆိုလိုတာကသင့်ရဲ့ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကတစ်လကိုဒေါ်လာ ၃၀၀ ဖြစ်မယ်။ ပံ့ပိုးသူသည်ကော်မရှင်တွင် ၅% ကောက်ခံသောကြောင့်သင်သည်အမြတ်အစွန်း ၂၈၅ ဒေါ်လာဖြင့်သွားသည်။
Provider2သည်အမြတ် ၂၀% ပြန်ပေးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုသည်တစ်လလျှင်ဒေါ်လာ ၂၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ပေးသွင်းသူသည်အမြတ်ငွေ ၃၀% ကောက်ခံသောကြောင့်သင်သည်အမြတ်အစွန်းအတွက်ဒေါ်လာ ၁၄၀၀ နှင့်အတူထွက်သွားသည်။
အထက်ပါဥပမာမှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်းအထက်ရှိပျမ်းမျှအကျိုးအမြတ်အတွက်မြင့်မားသောကော်မရှင်ကိုအခကြေးငွေပေးသည့် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူကိုရွေးချယ်ရန် ပို၍ ကောင်းသည်။ တနည်းပြောရရင်သင်ဟာဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့ ROI ကိုတသမတ်တည်းဖြစ်ထွန်းစေမယ့်သက်သေပြစနစ်အတွက်ပိုပြီးပေးဆပ်ရန်မျှော်လင့်သင့်ပါတယ်။
သို့ဖြစ်လျှင်ပံ့ပိုးပေးသူကမည်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားကိုမဆိုအကဲဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်သည်ငွေကြေးဝယ်ယူရန်နှင့်ရောင်းချသောအော်တိုအရောင်းစက်ရုပ်ကိုရှာဖွေနေပါသလားသို့မဟုတ်သင်ကဲ့သို့သောကုန်ပစ္စည်းများကိုသင်ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည် ရှေ, ဆီနှင့် ဓါတျငှေ့? ထိုသို့ပြောခြင်းဖြင့်၊ သင့်အား ပိုင်ဆိုင်မှုအတန်းအစားများစွာကို ထိတွေ့ခွင့်ပေးသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူကို ရွေးချယ်ခြင်းသည် တန်ဖိုးရှိပေမည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သင်သည် အလွန်ကွဲပြားသော အစုရှယ်ယာတစ်ခုကို ဖန်တီးရန် ဖြစ်နိုင်ချေ အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးကို ရပ်တည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
၂၀၂၀ ၏အကောင်းဆုံးအော်တိုကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများကိုသင်ရှာဖွေနေသည်၊ သို့သော်မည်သည့်နေရာတွင်စတင်မည်နည်း။ အောက်ဖော်ပြပါစျေးကွက်ထဲတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ထိပ်တန်းအဆင့်ပံ့ပိုးပေးသူများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အမြဲတမ်းလိုပဲ၊ စာရင်းမ ၀ င်ခင်သင့်ကိုယ်ပိုင်သုတေသနကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ။
အော်တိုကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူများကသင့်အားဘဏ္marketsာရေးစျေးကွက်များအားလုံး ၀ passive ပုံစံဖြင့်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုသည်။ အဆင့်မြင့်အဆင့်မြင့်သော algorithm ကိုသင့်ကိုယ်စားရောင်းဝယ်မှုကိုသုတေသနပြုရန်ခွင့်ပြုခြင်းအားဖြင့်သင်သည်မည်သည့်အလုပ်ကိုမျှလုပ်စရာမလိုဘဲအမြတ်အစွန်းရရှိရန်အခွင့်အရေးရှိသည်။ သင့်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနယ်ပယ်၌အတွေ့အကြုံနည်းနည်းမျှသာရှိပါကသို့မဟုတ်ကုန်သွယ်ရန်အချိန်မရှိပါက၎င်းသည်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
တစ်ဖက်တွင်ခက်ခဲသောအပိုင်းမှာသင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောအော်တိုအရောင်းအ ၀ ယ်ပလက်ဖောင်းတစ်ခုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ရဲရင့်သောတောင်းဆိုမှုများပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပိုက်ဆံနှင့်မခွဲခွာမီပံ့ပိုးသူ၏တရားဝင်မှုကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ လမ်းတစ်လျှောက်၌သင့်အားကူညီရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၂၀ ၏ထိပ်တန်းအော်တိုကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းများကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ အမြဲတမ်းသုတေသနသည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်သင်၏အိမ်စာကိုမစတင်မှီသေချာစွာပြုလုပ်ပါ။
AvaTrade - ကော်မရှင်မှကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်
အားလုံး CFD တူရိယာအပေါ် 0% ပေးဆောင်
ကုန်သွယ်ရန် CFD ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှု
အဆင့်မြင့်ကုန်သွယ်ရေး algorithm ကိုဒီဇိုင်းဆွဲခြင်းနှင့်တည်ဆောက်ခြင်းဖြစ်စဉ်သည်ပြီးပြည့်စုံအောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာနိုင်သည်။ စင်စစ်အားဖြင့်နည်းပညာသည်စျေးကွက်များအားပုံမှန်ထက်သာလွန်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်စဉ်ဆက်မပြတ်ပြင်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ အော်တိုကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးပေးသူသည်တည်ဆောက်ရန်ဤမျှလောက်ကြိုးစားအားထုတ်မှုလိုအပ်သည့်အခါသူတို့၏လျှို့ဝှက်ဆော့စ်ကိုအဘယ်ကြောင့်အခမဲ့ပေးမည်နည်း။ အရေးကြီးသည်မှာသင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်သည့်နေရာတွင်သင်ရရှိသည်။
ငါကော်မရှင် -based အော်တိုကုန်သွယ်ပေးသူအသုံးပြုသင့်ပါသလား?
ကော်မရှင်ကိုအခြေခံသောအလိုအလျောက်ကုန်သွယ်ရေးပံ့ပိုးသူများသည်သင်မည်သူပစ်မှတ်ထားသင့်သည်ကိုသိနိုင်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပံ့ပိုးပေးသူကသင့်ကိုတတ်နိုင်သမျှငွေရှာဖို့ငွေရေးကြေးရေးအရလှုံ့ဆော်ပေးလိမ့်မယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ ပံ့ပိုးသူသည်၎င်း၏အော်တိုအရောင်းအ ၀ ယ် algorithm ၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုထုတ်ပြန်ရန်မလိုအပ်ပါ၊ ထို့ကြောင့် ၄ င်း၏မဟာဗျူဟာများသည်လျှို့ဝှက်ထားမည်ကိုသေချာစေသည်။
Semi-Auto ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုဖြစ်စဉ်၏သုတေသနအပိုင်းကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းတစ်ခုကို algorithm ဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးသည်နှင့်၎င်းသည်သင့်အားလိုအပ်သော entry နှင့်выходစျေးနှုန်းများကိုသင့်ကိုပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ သို့ဖြစ်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ရန်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောပွဲစားတွင်တာဝန်ယူပါလိမ့်မည်။
လုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။ All-in အလိုအလျောက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည့်ပံ့ပိုးသူနှင့်သင်လက်မှတ်ထိုးလျှင်ကုန်သွယ်မှုအားလုံးသည်သင့်ကိုယ်စားနေရာချလိမ့်မည်။
အခြေခံနည်းပညာကို AI နှင့်စက်သင်ခြင်းကဲ့သို့သောခေတ်မီနည်းပညာများ၊ နည်းပညာညွှန်းကိန်းများစွာနှင့်အတူထောက်ခံသည်။
အော်တိုကုန်သွယ်မှုစက်ရုပ်အများစုသည် Forex နှင့် cryptocurrency စျေးကွက်များကိုအာရုံစိုက်သော်လည်း၊
၎င်းသည်ပေးသူမှအသုံးပြုသောစျေးနှုန်းပေါ်မူတည်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည်ကော်မရှင်အားငွေပေးချေသည့် platform တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေပါကအနိမ့်ဆုံးငွေသွင်းငွေပမာဏကိုဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်သည်။ ထို့နောက်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးလက်ကျန်သို့ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ၀ ယ်နေလျှင်၊ တစ်ကြိမ်တည်းကျသင့်သောအခကြေးငွေပေးရလေ့ရှိသည်။